Kwenzekani ngeTelefonica? | Ezezimali Zomnotho
Vele, esinye sezihloko ze-bearish ezikhona njengamanje yilezo ezihambelana neTelefonica. Babonile ukuthi ezinyangeni ezimbalwa intengo yamasheya abo ihambe kanjani isuka cishe kuma-euro angama-8 ngesabelo ngasinye yaba yinani elingaphansi kwama-euro ama-5. Ngamanye amagama, ihlupheke ukwehla okungaphezu kwama-30% ekuphelelweni yithemba kwabaninimasheya. Ngaphansi kwe-downtrend eyayingakhunjulwa isikhathi eside. Lapho ukucindezelwa kokuthengisa kubekwe khona ngokucacile kumthengi. Futhi okubi kakhulu, ngevolumu yokuqashwa okufanele ihlukaniswe njengemukelekile impela.
Okwamanje, bambalwa kakhulu abatshalizimali abancane nabaphakathi abathembela ekusebenzeni okuhle kwezwe ngocingo. Futhi-ke bakhetha ezinye izinketho ukwenza ukonga kwabo kube nenzuzo ngeziqinisekiso ezinkulu zempumelelo ekubekeni amanani abo. Isibonelo, ezinkampanini zikagesi ezisebenzisa amanani esiphephelo esimweni sokuguquguquka okukhulu ezimakethe zezimali. Ukuthi abanye abahlaziyi bezimakethe zezezimali banombono wokuthi izihloko ze-teleco zingakhuphukela ezingeni lama-euro ama-5 ngesabelo ngasinye kusukela manje kuqhubeke.
Isimo esingameme wena ukuthi uthathe izikhundla kunani. Uma kungenjalo, kunalokho, kungakuhle ukuthi ulinde kuze kube yilapho kunikezwa izimpawu zokuqala zokwakheka kwenhlabathi. Kusuka lapho ikwazi ukunqoba esikhathini esimaphakathi nasesikhathini eside futhi lokho kungaletha ikhono lokubuyekeza elikhangayo kakhulu lezintshisekelo zabatshalizimali abancane nabaphakathi. Ngakolunye uhlangothi, inethemba lokuthenga amasheya ayo ngamanani ashintshiwe kakhulu kunalawo alethwe yinkampani okwamanje. Lapho eminyakeni embalwa edlule ubesahlola amazinga kuma-euro ayishumi ngesabelo ngasinye.
1 Telefónica: ukwanda kwezabelo
2 Kusindwe yizikweletu neLatin America
3 Amalungelo eSoccer League
4 Izaphulelo kumikhiqizo yakho
5 Umholi ku-fiber optics
6 Ngamakhasimende angama-68%
Telefónica: ukwanda kwezabelo
Kodwa-ke, uhlangothi oluhle lwalokhu kusebenza kweTelefonica ezimakethe zezimali ukuthi isivuno saso sezabelo manje sesiphezulu kunangaphambi kwehlobo. Ngenzalo enikeza cishe u-7% kanye nelinye lamanani aphakeme kakhulu akha inkomba ekhethiwe yezimali zaseSpain. Ngisho nangaphambi kwamanani omkhakha kagesi, ngokwesiko aholele lokhu kukala emashumini eminyaka adlule. Lokhu kungumphumela wokufuna ukwazi owenze ukuwa kwamasheya enkampani futhi ngendlela yokuthi ama-savers yibo abahlomula kakhulu.
ITelefónica ikhokha u-0,40 euros njengesabelo minyaka yonke ngemali ekhokhwayo, eqinisekisiwe ukuthi ihlukaniswe izitolimende ezimbili zama-euro angu-0,20 lilinye. Ngale ndlela, umuntu ofaka imali ayongele ama-euro angu-5,80 ngesabelo ngasinye uzoba nesabelo esilinganiselwa kuma-euro angama-4.000 njalo ngonyaka nangemva kokudonswa kwentela. Lokho wukuthi, uzoba nemali engenayo nyangazonke minyaka yonke eduze kwama-350 euros. Vele, ngaphezulu kakhulu kwemikhiqizo yasebhange nemikhiqizo etholakalayo engenayo njengamanje. Lokho wukuthi, ukwakha iphothifoliyo yemali engenayo engaguquki ngaphakathi kokuguquguqukayo. Noma yini eyenzekayo ezimakethe zezimali.
Kusindwe yizikweletu neLatin America
Kunoma ikuphi, imiphumela yakamuva yenkampani ayizange ibe mibi ngokuphelele, kepha ngakolunye uhlangothi, yamukelwa kabi kakhulu izimakethe zezezimali. Lapho, iTelefonica ivale isigamu sokuqala sonyaka ngenzuzo yama-euro ayizigidi eziyi-1.787, ekhombisa ukwenziwa ngcono kuka-2,8% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Kusobala ukuthi ukusebenza kahle kwebhizinisi eSpain, e-United Kingdom naseJalimane kunxephezela ukuwa okubhaliswe eBrazil nase-Argentina. Kepha eminye imigqa yayo yebhizinisi iyaqhubeka nokudala ukungabaza okuningi kubatshalizimali abancane nabaphakathi.
Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, isithende sangempela se-Achilles se-telecom kazwelonke siyisikweletu saso esiphezulu esinqunyelwe kakhulu ngabahlaziyi bezezimali. Phakathi kwezinye izizathu ngoba ingabeka phansi ama-akhawunti wakho webhizinisi kusuka kuzindawo ezimbalwa ezilandelayo. Lapho esinye sezixazululo onaso ukusinciphisa ukwehlisa isivuno sokwahlukaniswa. Futhi lokhu kuyiqiniso ukuthi ama-ejenti wezezimali awathandi, ngoba uma kungenzeka, ukukhuphuka okusha kuzokwenyuka ngamanani abo. Ukufika ezingeni lokuthi lokhu kuzoba esinye sezikhiye zekusasa lenkampani yezokuxhumana kule minyaka ezayo. Futhi okubi kakhulu, ngevolumu yokuqashwa okufanele ihlukaniswe njengemukelekile impela.
Amalungelo eSoccer League
IMovistar ivuselele isizini ezayo amalungelo okusakaza eHorecas (amahhotela, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela) kokuqukethwe kwebhola le LaLiga Santander, iChampions League ne-Europa League, ukuze amakhasimende ezindawo ezineMovistar + azokwazi ukujabulela ukunikezwa okuphelele kwezemidlalo kuthelevishini. Kepha akucaci ukuthi lo msebenzi unenzuzo yezintshisekelo ze-telecom futhi kungatshazwa nokuthi inkontileka ingavuselelwa eminyakeni ezayo. Kungezinye zezinto eziza ukuchaza ukwehla okukhulu kwamanani emasontweni edlule noma ezinyangeni ezedlule.
Vele, amalungelo okusakaza emidlalo yebhola angadlala ngokumelene nezintshisekelo zale nkampani esohlwini. Kuze kufinyelele emazingeni aphansi kunalawo acashunwe njengamanje. Ngalo mqondo, kungcono ukulinda okwenzekayo ngefayela le- amalungelo okuphuma kwenzeka ukuthatha isinqumo. Kungaba ukuvula izikhundla noma, kunalokho, ukukhohlwa ngenani lesikhathi eside kakhulu futhi ungabi nenkinga engaphezu kweyodwa ngentengo yamasheya ayo. Yize kunabalamuli abaningi bezezimali abacabanga ukuthi amanani abo ashibhile kakhulu okwamanje. Noma okungenani zilungiswe kahle kakhulu.
Izaphulelo kumikhiqizo yakho
Konke lokhu yize abasebenzisi benkampani yezokuxhumana bezosizakala ngakho izaphulelo ezingeziwe kufika kuma-euro angama-150 kuma-smartphones aphezulu, futhi angakhokhela yonke i-Apple Watch ngezinyanga eziyisithupha zama-multiSim mahhala ngaphandle kwenzalo. Ngaphezu kwalokho, i-BuyBack iyinsizakalo inkampani kusukela manje izothenga amakhasimende idivayisi yabo yakudala lapho bethenga entsha. Ucezu lwezindaba olungakhuphuki neze ezimakethe zezimali. Uma kungenjalo, ngokuphambene nalokho, bekungathathi hlangothi ngaphakathi komongo ocacile we-bearish esikhathini esimaphakathi nesincane.
Kunoma ikuphi, izikhathi ezimbi zokutshalwa kwemali zisondela eminyakeni ezayo ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi intengo yayo ingaya kumazinga asondele kuma-euro ama-5 ngesabelo ngasinye. Ngaphandle kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi mhlawumbe futhi kusukela ekubukeni kwezisekelo zayo.
Umholi ku-fiber optics
ESpain, sekuvele kunamakhaya angaphezu kwezigidi eziyisithupha asebenzisa i-fiber optics yeTelefonica ukuthola izinsizakalo zabo zokuxhuma, ezimele ukwanda okungaphezulu kuka-24% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo sonyaka odlule. Lokhu kukhula kwesibalo semindeni efinyelela ezinsizakalweni zayo ngenethiwekhi yeTelefonica kubonakala ekusebenzeni kwayo, ngoba ukusetshenziswa kwefayibha yomqhubi kufinyelele ku-27% wenani lonke ngoJuni, iphesenti eliphakeme ngamaphuzu ama-3 kusibalo sikaJuni 2018.
Ngalo mqondo, iTelefonica inenethiwekhi enkulu kakhulu ye-fiber optic eya ekhaya eYurophu futhi iyaqhubeka nokwenza uhlelo lokutshala oluvelele ngenhloso yokufinyelela ekusakazweni okuphelele kwefayibha ngonyaka ka-2025. Kusukela namhlanje, opharetha usevele umboze i-fiber 70% insimu kazwelonke. Kusukela ngoJuni 30, inani lama-Real Estate Units adlule ku-fiber lifinyelele kwizigidi ezingama-22,2, ukwanda cishe kuka-10%. Mayelana noJuni wangonyaka odlule, amakhaya amasha ayizigidi ezimbili anenethiwekhi angayisebenzisa. Lokhu kumelela ngaphezu kwe-2 noma i-3 yama-Units Real Estate.
Emakhaya angaphezu kwezigidi eziyisithupha asebenzisa i-fiber kaTelefonica, izigidi eziyi-4,15 ngamakhasimende eMovistar, amele ama-68% alabo abasebenzisa i-BAF, kanti amanye, angu-1,86 million, angamakhasimende aphelele afinyelela kwinethiwekhi ngomunye opharetha. Womabili amaqembu amaklayenti abhekane nokukhula okuqhubekayo eminyakeni yamuva. Uma siyiqhathanisa nonyaka owedlule, kusukela ngoJuni 2019, amaklayenti eMovistar asekhule ngaphezu kuka-13% ngenkathi amakhasimende amaningi efinyelele ekukhuleni kuka-61%.
UMovistar, iphayona ekusetshenzisweni kwengqalasizinda ye-fiber, waqala ukuyimaketha ngo-2008 ngejubane lokulanda elingu-30 Mbps. Kusukela ngalolo suku, ukuziphendukela kwemvelo akukaze kumiswe, emakhaya amaningi adluliswe nge-fiber, nakumakhasimende athole izinsizakalo kuleyo ngqalasizinda nangejubane lenethiwekhi, afinyelela kuma-600 Mbps symmetric kulo nyaka.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Kwenzekani ngeTelefonica?